अर्थ खबर Archives - Page4of9- www.kchhakhabar.com
२७ हजारसम्मको मात्र नयाँ नोट साट्न पाइने, यी हुन तोकिएका ठाउँ
काठमाडौं । दशैँलाई लक्षित गरेर नेपाल राष्ट्र बैंकले दशैंका लागि आज अर्थात् भदौ २८ गतेदेखि नयाँ नोट सटही सुविधा उपलब्ध गराउन थालेको छ । राष्ट्र बैंकले हरेक वर्ष दशैंमा नयाँ नोट उपलब्ध गराउँदै आएको छ । ५, १०, २० ५० र १०० रुपैयाँ दर नयाँ नोट साट्न पाइने छ । राष्ट्र बैंकले बढीमा एकजना सर्वसाधारणलाई २७ हजार रुपैयाँका दरले नयाँ नोट उपलब्ध गराउने छ । राष्ट्र बैंकको थापथली काउन्टरबाट नयाँ नोट साट्न ...
लक्ष्मी लघुवित्तको १० प्रतिशत बोनससहित २६.३२ प्रतिशत लाभांश प्रस्ताव
लक्ष्मी लघुवित्त वित्तीय संस्थाले २६.३२ प्रतिशत लाभांश वितरण गर्ने प्रस्ताव गरेको छ । कम्पनीको मंगलबार बसेको संचालक समितिको बैठकले गतबर्षको कमाईबाट उक्त परिमाणको लाभांश वितरण गर्ने प्रस्ताव गरेको हो । लघुवित्तले १० प्रतिशत बोनस सेयर तथा कर प्रयोजनसहित १६.३२ प्रतिशत नगद लाभांश वितरण गर्ने प्रस्ताव गरेको हो । कम्पनीले प्रस्ताव गरेको लाभांश राष्ट्र बैंकको स्वीकृति पश्चात कम्पनीको आगामी साधारणसभाले...
काठमाण्डाै । क्षेत्रपाटीबाट गत आइतबार राति बरामद भएको ८८ किलो सुन खरिदका लागि तस्करले २० करोड धरौटी राखेको खुलेको छ। तस्करले २० करोड रुपैयाँ मात्र धरौटी राखेर बाँकी रकम भनेको ठाउँमा पुगपछि दिने शर्तमा सुन काठमाडौं भित्र्याइएको प्रहरी अनुसन्धानबाट खुलेको हो। सो रकम धरौटी राखेपछि चिनियाँ व्यापारीले किस्ता किस्तामा सुन पठाएका हुन्। सो सुन काठमाडौं ल्याएर भारतको कोलकाता लैजाने योजना थियो। चिनियाँ ...
काठमाडौं । नेपाल एउटा हुर्कदैं गरेको अर्थतन्त्र हो । जसलाई बिकासोन्मूख देश भन्न पनि अलि गाह्रै पर्छ । त्यसैले यहाँ समृद्धि प्राप्त गर्न निकै गाह्रो र सजिलो दुवै छ ।सिर्जनशील सोच, दृष्टिकोण र आइडिया भए सानो लगानीमै राम्रो नाफा कमाउने ब्यवसाय बनाउन नसकिने होइन । यहाँ नेपालमा हुनसक्ने १० राम्रा ब्यवसायीक अवसरहरुका बारे चर्चा गरिने छ । तर, केही आफ्नै अध्ययन र अनुसन्धानको पनि खाँचो त परिहाल्छ । १...
पुल भत्किएपछि राजश्वमा गिरावट
विराटनगर । जोगवनीस्थित मिरगन्ज खोलाको पुल क्षतिग्रस्त भएपछि विराटनगर भन्सार कार्यालयको राजस्व संकलन प्रभावित भएको छ । पुल क्षतिग्रस्त भएको तीन सातासम्म पनि मर्मत नहुँदा ५७ करोड रुपैयाँ राजस्व गुमेको भन्सार कार्यालय विराटनगरले जनाएको छ । पुल नभएका कारण विराटनगर नाका भएर हुने आयात निर्यात प्रभावित बनेको कार्यालयले जनाएको छ । भदौमा २ अर्व ३९ करोड राजस्व संकलन गर्ने लक्ष्य राखिएकोमा हालसम्म ८३ करोड ६...
व्यापारीको आँखा तस्करी सुनमाथि
काठमाण्डौं । तस्करी सुनको गुणस्तर राम्रो भएपछि व्यापारीको ध्यान त्यसतर्फ केन्द्रित हुँदै गएको छ । सरकारबाट अनुमति पाएका बैंकहरूले ल्याएको सुनभन्दा तस्करी सुनको गुणस्तर राम्रो भएपछि व्यापारीको ध्यान त्यसतर्फ केन्द्रित हुँदै गएको हो । बैंकिङ च्यानलबाट आयात भएको सुनबाट गहना बनाउँदा जर्ती बढी जाने र कम नाफा हुने भएकोले व्यापारीले तस्करी सुनमाथि चासो राख्न थालेका हुन् । तस्करीको सुनको गुणस्तर राम्रो भ...
भारतका कारण नेपाललाई अर्को ठूलो नोक्सानी : खुल्यो यस्ताे रहस्य
काठमाडौं । भारतले वस्तु तथा सेवा कर जिएसटी लागू गरेपछि अनधिकृत ब्यापारमा कमी आउने सरकारको विश्वास विपरित ब्यवसायीले भन्सार राजस्व छल्न सुरु गरेका छन् । एकथरी ब्यवसायीले जिएसटी बिलमा सामान किनेको मूल्य कम देखाएर राजस्व छलेका छन् भने अर्कोथरीले तराईका विभिन्न छोटी भन्सारबाट अवैध रुपमा सामान आयात गरेर राजस्व छलेका छन् । नागरिक दैनिकले समाचार छापेको छ । भारतले जिएसटी लागू ...
संसद् सचिवालयका कर्मचारीलाई सुविधै सुविधा, सचिवको तलब मन्त्रीभन्दा दोब्बर !
१२ भदौ, काठमाडौं । संसद् सचिवालयको एक समूहले संसदका महासचिव र सचिवहरुको मासिक तलब तलब, भत्ता र विविध शीर्षकका नाममा सुविधा नेपाल सरकारका मन्त्रीको भन्दा झन्डै दोब्बर हुने गरी वृद्धि गर्न कानुनको मस्यौदा तयार गरेको छ । मस्यौदाअनुसार, संसदका महासचिवले मासिक न्यूनतम एक लाख ९७ हजार र सचिवले तलबभत्ता मात्र मासिक ९० हजार रुपैयाँभन्दा बढी प्राप्त गर्ने उल्लेख छ । महासचिव र सचिवका तलब, भत्ताबाहेक, ...
नक्कली चेक प्रयोग गरी सेवाग्राहीका रु ४० लाख झ्वाम पार्ने बैंकका दुई कर्मचारी पक्राउ
गौशाला । नक्कली चेक प्रयोग गरी सेवाग्राहीका रु ४० लाख निकालेर हिनामिना गरेको आरोपमा प्रहरीले महोत्तरी बर्दिवासस्थित राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकका दुईजना कर्मचारीलाई पक्राउ गरेको छ । पक्राउ पर्नेमा राबा बैंक बर्दिवासका वरिष्ठ सहायकद्वय बर्दिवास नपा– ८ का ४८ वर्षीय जगदिश काफ्ले र काभ्रेपलाञ्चोक धुलिखेल नपा– ११ का ३५ वर्षीय अम्बिका पौडेल रहेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय महोत्तरीका प्रहरी नायब उपरीक्षक दीपक पो...
मृतकले समेत लिए १० लाख राहत !
काठमाडौं । १० वर्षे सशस्त्र द्धन्द्धबाट छोराको मृत्युभएको नक्कली कागजातको आधारमा स्याङ्जाको श्रीकृष्ण ९ की गीता भट्टराईले १० लाख रकम लिएकी छन् । आफ्नो छोरा राजेन्द्र भट्टराईको द्धन्द्धको क्रममा माओवादीले हत्या गरेको कागन बनाई शान्ति तथा पुननिर्माण मन्त्रालयको पाचाैं प्रतिवेदनमा द्धन्द्ध प्रभावितको नामावलीमा नाम अङ्कित गरी रकम लिएकी हुन् । वि.सं. २०४८ जेठ १३ गते मृत्यु भएको छोराको ५ वर्ष पछाडि ०५...